जनप्रतिनिधिको जम्बो टोली भारत भ्रमण निस्कियो, संघीयतको अवलोकन गर्ने ! - Naya Patrika
जुम्ला | माघ ०९, २०७४
सरकारी कर्मचारीसहित जनप्रतिनिधिको जम्बो टोली १० दिने भ्रमणमा हिँडेपछि गाँउपालिकाको दैनिक महत्वपूर्ण सेवा प्रवाहको कार्य रोकिएको स्थानीयले बताए । १० दिने संघीयता अवलोकन अध्ययन भ्रमण कार्ययोजना गाउँ कार्यपालिकाबाट पास भएको भ्रमण टोलीका सदस्य तथा ४ नं. वडाध्यक्ष जंगप्रसाद जैशीले बताए । भ्रमण टोली सिक्किम र दार्जिलिङमा मात्र करीब एकहप्ता घुम्ने छ ।
गाउँपालिकाको सबै विकासे काम ठप्प पार्दै जम्बो टोली भ्रमणमा जानु उपयुक्त नभएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गरेका छन् ।
आफ्नो गाउँठाउँको आधारभुत विकासका लागि जम्बो टोलीको भ्रमण आवश्यक नरहेकाले भ्रमणले गाउँपालिकाको विकासे रकम दुरुपयोग भएको स्थानीय रामप्रसाद पाण्डेले बताए । संघीयता भ्रमण अध्ययनका नाममा गाउँपलिकाका जिम्मेवार पदमा रहेका सबै प्रमुखहरू स्थानीय तहको रकम लिएर घुम्न गएका हुन् ।